Si fudud Koontorool Mac ka Android la Best 6 Mac Apps Remote
Helitaanka iyo macluumaadka u dhexeeya aad telefoon iyo Mac wareejinta ayaa had iyo jeer dhibaato, sax? Hadda, aad ku raaxaysan kartaa dhaaf ah in user ah Android. Waxaad fog xakamayn kartid Mac la qalab gacanta lagu waafajinta content muuqan. Waa inaad fog Mac ka qalab Android aad si ay u leeyihiin maadooyinka kale ee labada telefoonka aad iyo computer. Waxaad ku raaxaysan karaan helitaanka xogta on your computer si fudud oo toos ah-ku-tagaan. Ma jiri doonto baahida loo qabo in si xogta gacanta. Xidhiidh hufan oo ammaan ah oo u dhexeeya qalabka Android iyo computer ka dhigi doonaa nolosha fudud. Ma aad heli doontaa oo kaliya files iyo barnaamijyadooda aad meel kasta, laakiin sidoo kale loo xakameeyo oo loola socdo iyaga. Iyada oo yidhi, qodobkan diyaarisaa sare 7-ada Android kara fog Mac.
1. Kooxda siladda Free Kala duwan leh qalab 4.5 Android 2.1 iyo ilaa
2. Splashtop 2 Desktop Remote Free 18 4.6 Android 2.2 iyo ilaa
3. VNC siladda Free 4.6M 4.4 Android 2.1 iyo ilaa
4. Mac Remote Free 4.1m 4.7 2.3 Android ama ka dib
5. Chrome Desktop Remote Free 2.2m 4.4 4.0 Android ama ka dib
6. Jump Desktop (RDP & VNC) Lacag 5.7M 4.7 2.3 Android ama ka dib
1. Kooxda siladda
Kooxda siladda waa codsi ah oo lacag la'aan ah loo isticmaalo fog naftaada xakamee, MAC oo si fudud loo rakibi karo. Si ka duwan codsiyada kale kuwaas oo mar walba socda, Kooxda siladda loo baahan yahay in gacanta bilaabay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u tarayo ikhtiyaar aan ku socodsiiyo iyo password caado hor helitaanka aad MAC. Encryption Strong, keyboard buuxa, iyo ammaanka sare hab maamuuska waa yar ee muhiimka ah ay. Sidoo kale, waxay u saamaxdaa wareejinta faylasha labada dhinacba oo la isticmaalayo internetka u fog fog si aad MAC helaan. Inkasta oo uu leeyahay haystaa sacab muggiis oo muuqaalada, ma aha fursada ugu wanaagsan haddii aad doonayso in aad u ordaan codsiyada culus fog.
Download Kooxda siladda ka Google Play >>
2. Splashtop 2 Desktop Remote
Splashtop waa mid ka mid ah codsiyada desktop fog ugu horumarsan, ugu dhaqsaha badan oo dhamaystiran, kaas oo u ogolaanaya in aad ka faa'iideysataan ee xawaaraha sare oo tayo leh. Waxaad ku raaxaysan karaan 1080p videos, sidoo kale loo yaqaan Full HD. Ma aha oo kaliya la shaqeeya aad MAC (OS X 10.6+), laakiin sidoo kale la Windows (8, 7, Vista, iyo XP) iyo Linux. Dhamaan barnaamijyada waxaa taageera Splashtop in loo xiraa in your computer. Waxaad si fudud u socon kartaa shaashadda kombuyuutarka aad sabab u ah fasiraadda hufan ee baaqa Multitouch ee App this. Waxa ay ku siinaysaa in ay helaan 5 kombiyuutarada via Splashtop hal xisaab ah in ka badan network deegaanka. Haddii aad rabto in ay helaan internetka, waxaad u baahan tahay inaad isku qori meel Access Pack via Iibso In-App.
Download Splashtop 2 Desktop Remote ka Google Play >>
3. VNC siladda
Siladda VNC waa hab garaaf maamula desktop-maamuuska. Waa wax soo saarka ay dalka alifay helaan fog technology. Waa adag tahay in la dhigay ilaa iyo waa madal ku tiirsan. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin qaar ka mid ah muuqaalada fiican sida boggan soo jiiday, dhaqdhaqaajinta jirka, noqanayaa Mozilla, oo ah qaab ayna si toos ah, laakiin waxay ku xiran tahay xawaaraha internet. Waxaa jira tiro kooban oo innaba kombiyuutarada waxa aad heli kartaa via VNC siladda midna muddada wakhtiga aad helaan. Waxa kale oo ka mid ah sirta iyo sugida ah ee la xidhiidha aamin ah si aad u computer. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay leedahay khasaaraha qaarkood sida arrimaha amniga iyo waxqabadka. Sidoo kale, waxa loo baahan yahay qaabeynta ka badan inta kale oo adag yahay waxoogaa.
Download VNC Viewe ka Google Play >>
Haddii qalabka android iyo MAC OSX wadaagaan shabakadda WiFi isku mid ah iyo aad rabto in aad isticmaasho qalabka android sida qofka xukuma warbaahinta fog, ka dibna MAC fog waa go'aan sax ah. App Tani waa la jaan qaada tiro ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
Kaliya ee aad dib u fariisan karo oo ku nastaan ​​aad Gogol halka daawashada filim on your MAC iyo mugga jimicsi, dhalaalka oo gacanta ku aasaasiga ah loo maqli kale iyadoo la isticmaalayo qalab android sida fog ah. Waxa kale oo aad ka badalan karaa off aad MAC isticmaalaya MAC fog. Waxay asal ahaan ka shaqeeya sida qofka xukuma warbaahinta ah oo ay taageertaa barnaamijyada kor ku xusan oo sidaas daraaddeed ma loo isticmaalaa in lagu hago oo dhan MAC. Waa sahlan laakiin sidoo kale ku koobnayn in la isticmaalo. Cabbirka Remote MAC waa 4.1m. Waxay u baahan tahay Android version 2.3 oo ilaa iyo uu leeyahay score rating ah 4.0 on Google play.
Download Mac Remote ka Google Play >>
5. Chrome Desktop Remote
Haddii aad isticmaalayso Google Chrome web browser, markaas aad si fudud ku raaxaysan karaan fog in ay helaan aad MAC ama PC by rakibidda dheeraad ah oo loo yaqaan Chrome desktop Remote in aad Chrome web browser. Waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo kordhinta iyo ku siiyaan sugida via PIN qof ahaaneed. Waxaad u baahan doontaa in la qortey shubo xisaabta Google. Isticmaal aqoonsiga isla Google ee internetka kale Chrome iyo waxaad arki doontaa magacyada kale ee PC kuwaad la doonayaa inuu ku soo bilowdo fadhiga fog. Waa mid aad u fudud in la dhiso iyo sida loo isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu u ogolaan file sharing iyo fursadaha kale ee horumarsan in barnaamijyadooda kale helaan fog bixiyaan. Waxaa la socon kara nidaamka wax qalliinka kaas oo isticmaala Google Chrome. Cabbirka Chrome Desktop Remote waa 2.1m. Waxay u baahan tahay Android version 4.0 oo ilaa iyo uu leeyahay score rating ah 4.4 on Google play.
Download Chrome Remore Desktop ka Google Play >>
Iyadoo Jump Desktop, ka dambeeya your computer ama laptop waxaad ka bixi kartaa oo wuxuu ku raaxaysan fog in ay helaan meel 24/7. Waa mid ka mid ah codsiyada helaan fog xoog badan, taas oo kuu ogolaanaysa inaad si ay u helaan iyo xakamayso PC ka qalab android aad. Security, isku halaynta, xog, interface user fududeeyey, waafaqsan yahay RDP iyo VNC, kormeerayaasha badan, iyo sirta yihiin xooga ay. On aad PC ama MAC, u tag http://jumpdesktop.com/go oo raac talaabooyinka fudud si aad u bilowdo waqti. Waxay leedahay sifooyinka la mid ah sida ugu badan ee codsiyada sida yaabtid-to-zoom, waxayna jiidayeen mouse, iyo laba boggan farta. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud oo qaab aan muuqan xakameeyo your computer. Waxa kale oo ay taageertaa keyboard dibadda buuxa iyo jiirka, ku siinaya dareenka PC oo kale ah. Marka iibsaday, waxaad u isticmaali kartaa dhammaan qalabka Android. Mase codsiyada aan ku keeni lahayd khasaaraha la xidhiidha.
Top 5 Free-adda u Android
Best 5 Android Software in Download
Top Video Downloader 5 for Android
Top 20 Free iyo mushaarka Android Apps
Top 8 Contact Manager for Android
Top 10 Maareeyayaasha SMS Android
Top Manager 6 Android Wi-Fi
Top 5 Manager Android Bluetooth
> Resource > Mac > Best 6 Mac Remote Apps Si fudud Koontorool Mac ka Android